Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.2.2 Otuowo-nzuzo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị manifestos
Yiri na Zoo Zoo, e nwere ọtụtụ ọnọdụ ebe ndị na-eme nchọpụta na-achọ ịchọta, dozie, ma ọ bụ kpọpụta ihe oyiyi ma ọ bụ mpempe akwụkwọ. Otu ihe omuma nke uzo nyocha a bu nchikota nke ndi ochichi. N'oge ntuli aka, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emepụta ihe ngosi na-akọwa ọnọdụ iwu ha na nkà ihe ọmụma ha. Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ otu akụkụ nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ na United Kingdom site n'afọ 2010:
Njirimara ndị a nwere data bara uru maka ndị ọkà mmụta sayensị, karịsịa ndị na-amụ ntuli aka na usoro nke arụmụka iwu. Iji wepụ ihe ọmụma site n'aka ndị a, ndị nchọpụta kere Ụlọ Ọrụ ahụ, bụ nke nakọtara 4,000 ngosi site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu 1,000 na mba 50 ma hazie ndị ọkà mmụta sayensị ka ha dezie ha. Onye ọkachamara na-eji okwu nke ọ bụla na-egosipụta atụmatụ nke 56. Ihe nchoputa nke mmekorita aka a bu ihe omuma nke buru ibu nke achikota ihe edeputara na ihe ngosi ndi a, ma jiri akwukwo dataset a karia 200 akwukwo sayensi.
Kenneth Benoit na ndị ọrụ ibe ya (2016) kpebiri iwepụta ọrụ nzuzo ahụ nke ndị ọkachamara mere n'oge gara aga ma mee ka ọ bụrụ ọrụ nhazi mmadụ. N'ihi ya, ha kere usoro nhazi nke nwere ike ịmụtaghachi ma gbanwee, ọ bụghị ikwu ọnụ ala na ngwa ngwa.
Na - eme ihe ngosi iri na asatọ nke mere na nhoputa aka isii na nso nso a na United Kingdom, Benoit na ndị ọrụ ibe ha jiri atụmatụ na-ejikọta ọnụ na ndị ọrụ sitere na ahịa ọrụ microtask (Amazon Mechanical Turk na CrowdFlower bụ ihe atụ nke azụmahịa ahịa nke microtask; , lee Isi nke 4). Ndị nnyocha ahụ weere ihe ngosi ọ bụla wee kewaa ya n'ime ahịrịokwu. Ọzọ, onye tinyere usoro nzuzo ahụ na nke ọ bụla. Karịsịa, a gwara ndị na-agụ akwụkwọ ka ha gụwaa ahịrịokwu ọ bụla ka ọ na-ezo aka n'ụkpụrụ akụ na ụba (aka ekpe ma ọ bụ aka nri), na iwu mmekọrịta mmadụ (ntọala ma ọ bụ nke na-adịghị agbanwe agbanwe), ma ọ bụ na (ọgụgụ 5.5). Ikwu okwu nke ndi mmadu ise di iche iche. N'ikpeazụ, a jikọtara Ụkọlọtọ ndị a site na iji usoro ndekọ ahazi nke na-agụnye mmetụta nke onye ọ bụla na nsogbu nke nsogbu. N'ozuzu, Benoit na ndị ọrụ ibe chịkọtara 200,000 ọkwa site na ihe dị ka mmadụ 1,500.
Figure 5.5: Usoro nhazi site na Benoit et al. (2016) . A gwara ndị na-agụ akwụkwọ ka ha kpaa akara nke ọ bụla ka ọ na-ezo aka n'ụkpụrụ akụ na ụba (n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri), na iwu nke mmadụ (akaazụ ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe), ma ọ bụ na o nweghị. Adabere n'aka Benoit et al. (2016) , onu ogugu 1.
Iji chọpụta àgwà ìgwè mmadụ ahụ, Benoit na ndị ọrụ ibe ya nwekwara ndị ọkachamara ọkachamara 10 na ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị-ọnụego ahụ gosipụtara otu usoro ahụ. Ọ bụ ezie na ntụle nke ndị otu n'ime ìgwè ahụ dị iche karịa ntụle nke ndị ọkachamara, ọnụ ọgụgụ mmadụ kwadoro nwere nkwekọrịta dị ịrịba ama na njirimara ọkachamara (ọgụgụ 5.6). Ntụkọ a na-egosi na, dịka na Zoo Zoo, ọrụ nyocha mmadụ nwere ike ịpụta nsonaazụ dị elu.
Ihe odide nke 5.6: Atụmatụ ndị ọkachamara ( \_(x\_) -axis) na atụmatụ ìgwè mmadụ ( \_(y\_) -axis) nọ na nkwekọrịta dị ịrịba ama mgbe ịchọrọ akara ngosi 18 sitere na United Kingdom (Benoit et al. 2016) . Okpukpe ndị ahụ sitere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị atọ (Conservative, Labour, Liberal Democrats) na nhoputa isii (1987, 1992, 1997, 2001, 2005, na 2010). Adabere n'aka Benoit et al. (2016) , onu ogugu nke 3.
N'ịkwado ihe a, Benoit na ndị ọrụ ibe ha ji usoro nzuzo ha na-eme nchọpụta nke na-agaghị ekwe omume na usoro nhazi usoro ọkachamara nke ọrụ ngosi ahụ. Dịka ọmụmaatụ, Ọrụ Nchịkọta ahụ akọwaghị ihe ngosi na isiokwu banyere mbata na ọpụpụ n'ihi na ọ bụghị isiokwu dị nro mgbe e mepụtara atụmatụ nzuzo ahụ n'etiti afọ 1980. Na, na ugbu a, ọ bụ ihe a na-apụghị ịkọwapụta maka ọrụ nke ihe ngosi ahụ iji laghachi azụ ma gbanwee ihe ngosi ha iji jide ozi a. Ya mere, ọ ga - egosi na ndị na - eme nchọpụta nwere mmasị n'ịmụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mbata na - aga nke ọma. Otú ọ dị, Benoit na ndị ọrụ ibe ha nwere ike iji usoro nhazi nke mmadụ mee nke a-ahaziri maka ajụjụ nnyocha ha-ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Iji nyochaa iwu mbata na ọpụpụ, ha gbanyere ihe ngosi maka nnọkọ asatọ na nhoputa aka n'ozuzu 2010 na United Kingdom. Akpanyere okwu nke ọ bụla na manifesto ọ bụla ma ọ dị na njem ọpụpụ, ma ọ bụrụ otú ahụ, ma ọ bụ pro-mbata, nnọpụiche, ma ọ bụ mgbochi ọpụpụ. N'ime awa ise nke na-ebido oru ngo ha, ihe si na ya pụta. Ha achọtara ihe karịrị 22,000 nzaghachi na ngụkọta $ 360. Ọzọkwa, atụmatụ si na ìgwè mmadụ gosipụtara nkwekọrịta dị ịrịba ama na nyocha mbụ nke ndị ọkachamara. Mgbe ahụ, dị ka ule ikpeazụ, ọnwa abụọ ka nke ahụ gasịrị, ndị nchọpụta ahụ weghaara ìgwè mmadụ ha. N'ime awa ole na ole, ha ekepụtawo otu ihe nkwekọrịta ndị ọhụrụ-na-ejikọta na ihe ndekọ data ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nchịkọta ụmụ mmadụ mere ka ha nwee ike ịmepụta ihe ederede ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke kwetara na ndị ọkachamara nyochaa ma bụrụ ndị a pịpụtara. Ọzọkwa, n'ihi na nhazi mmadụ dị ngwa na ọnụ ala, ọ dịịrị ha mfe ịhazi nchịkọta data ha na ajụjụ nchọpụta ha kpọmkwem banyere mbata na ọpụpụ.